DF Soomaaliya oo sheegtay in ay diyaar ula tahay dawlad gobaleedyada iyo cid walba in ay kala hadasho wixii ay tabanayaan | Www.tusmo.net
DF Soomaaliya oo sheegtay in ay diyaar ula tahay dawlad gobaleedyada iyo cid walba in ay kala hadasho wixii ay tabanayaan
MUQDISHO(P-TIMES)- Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya oo dhexda uga jirta jahawareer uga yimid dawlad gobaleedyada dalka oo awood badan ku leh siyaasadda gudaha ee dalka ayaa bilowday in ay raadiso wadiiqo ay ku xaliso khilaafaadka sii kordhaya ee uga imaanaya dawladdaha xubnaha ah.
Wasiirka Arrimaha gudaha, Dibu heshiisiinta iyo Faderaalka Cabdi Faarax Juxa ayaa sheegay in ay dadaal kasta ku bixinayaan sidii dalkan marxalada uu ku jirro loo dhaafin lahaa, isagoo sheegay in ay furan yihiin albaabada dawladda Faderaalka.
Mr, Juxa ayaa cadeeyey in waqtigan uu yahay xili xasasi ah oo ay Soomaalida oo dhan u baahan yihiin in ay isku dhinac u dhaqaajiyeen doonta horumarka, wuxuuna bogaadiyey talaabo kasta oo wanaagsan.
Wasiirku wuxuu si dad-ban uga hadlay shirka magaalada Kismaayo, wuxuuna sheegay in ay dawladda Soomaaliya soo dhaweynayso wax kasta oo horumar u horseedaya dalkan, ayna muhiim tahay in wada hadal lays kugu yimaado.
Dawladda Soomaaliya ayaan wali si rasmi ah faahfaahin uga bixin ujeedooyinka siyaasadeed ee ay ka leedahay, faragalinta ay ku sameyso dawlad gobaleedyada qaarkood, gaar ahaana HIRSHABEELLE, Galmudug & Koonfur Galbeed.
Dawladdaha xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ayaa hadda kushirsan magaalada Kismaayo, waxayna maanta soo saarayaan warsaxaafadeed ay uga hadlayaan xaaladda dalka iyo waxyaabaha kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya, kaas oo ah mid aad loo sugayo.